myanmarrubyenterprise.com - Advertising Gems
THE TWENTY - NINTH GEMS & JADE SALES (2010) OF
THE UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LIMITED
1. The Twenty - Ninth Gems & Jade Sales of the Union of Myanmar Economic Holdings Limited will be held from the 20th to 24th August 2010 at the Myanmar Gems Pavilion, Kaba Aye Pagoda Road , Yangon according to the following schedules :
(a) Viewing and examination by buyers from the 20th to 22nd August 2010 ;
(b)Selling by Bargain and Auction Systems from the 23th to 24th August 2010.
2. Starting from the 15th August 2010 potential buyers are requested to register withafee of Euro ( 20 ) for foreigners and Kyat ( 10,000 ) for Myanmar Citizens.
3. From the 27th July 2010 to 9th August 2010, private gems and jade enterpreneurs are requested to come and submit the gems , jade and other items they wish to sell.
4. A service charge of ( 0.4 ) percent will be levied on these items. In addition ,asales commission of (1) percent for foreign exchange transactions and (3) percent for Myanmar Kyat transactions will be charged, the amounts to be paid to the Union of Myanmar Economic Holdings Limited. Furthermore , the buyer will need to pay tax according to the Myanmar Gems Rules and Laws issued by the Ministry of Mines.
5. We would like to announce that Rough Ruby from Mogok, weighing ( 33.50 ) carats, clear , flawless, transparent and ofared colour, starting price Kyat ( 150 )million will be on sale. Another Rough Ruby from Mogok, weighing (76.00 )carats, flawless, glass texture, light pigeon blood colour, the reserved price Kyat ( 100 )million. A Rough Sapphire from Mogok, weighing ( 366.80 )carats, wax texture, velvet blue colour, star or good cabochon quantity, starting price Kyat ( 100 )million will be on sale. Magnificant Pink Tourmaline (Rubellite) Crystals with quartz and feldspar in matrix weighing (19)kilogram , the starting price Euro (5)million .
6. Further details can be obtained from :
(a) Myanmar Ruby Enterprise (Gems & Jewellery)Co.,Ltd
(Former Union Bank Building), Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon .
Phone : 371053 , 370561
Website : http:// www.myanmarrubyenterprise.com
(b) Myanmar Imperial Jade (Gems & Jewellery) Co.,Ltd.
No. 22, Pyay Road , Mayangone Township, Yangon.
Phone : 662646 , 666218
( ၂၉ )ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက် နှင့် ကျောက်စိမ်းရောင်းချပွဲ - ( ၂၀၁၀ )
၁။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၏ ( ၂၉ )ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်နှင့်
ကျောက်စိမ်းရောင်းချပွဲ ( ၂၀၁၀ ) ကို( ၂၀-၈-၂၀၁၀)မှ (၂၄-၈-၂၀၁၀)ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့
ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းရှိ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာခန်းမ၌ အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပ
ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည် -
( က ) ( ၂၀-၈-၂၀၁၀ )ရက်နေ့မှ ( ၂၂-၈-၂၀၁၀ )ရက်နေ့ထိ
( ခ ) ( ၂၃-၈-၂၀၁၀ )ရက်နေ့မှ ( ၂၄-၈-၂၀၁၀) ရက်နေ့ထိ
Bargain and Auction စနစ်များဖြင့် ရောင်းချခြင်း။
၂။ ဝယ်လိုသူများသည် ( ၁၅-၈-၂၀၁၀ )ရက်နေ့မှစ၍ မှတ်ပုံတင်ကြေး နိုင်ငံသား ကျပ်
( ၁၀ဝ၀ဝ ) ၊ နိုင်ငံခြားသား ယူရို ( ၂၀ )နှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်
၃။ ပုဂ္ဂလိကကျောက်မျက် ၊ကျောက်စိမ်း လုပ်ငန်းရှင်များမှလည်း မိမိရောင်းချလိုသည့်
ကျောက်မျက် ၊ ကျောက်စိမ်း နှင့် အချောထည် လက်ဝတ်ရတနာများကို (၂၇-၈-၂၀၁၀ )
ရက်နေ့မှ ( ၉-၈-၂၀၁၀) ရက်နေ့အတွင်းလာရောက် အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
၄။ ရောင်းချရန်တင်သည့် ရတနာပစ္စည်း၏ တန်ဖိုးပေါ်တွင်(ဝ.၄)ရာခိုင်နှုန်းကို ဝန်ဆောင်ခ
အဖြစ်လည်းကောင်း ရောင်းချရပါက ရောင်းချရရှိငွေ( နိုင်ငံခြားငွေဖြစ်ပါက ( ၁ )ရာခိုင်နှုန်း
မြန်မာကျပ်ငွေဖြစ်ပါက ( ၃ )ရာခိုင်နှုန်း )ကို ကော်မရှင်ခ အဖြစ်လည်းကောင်း
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်သို့ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရတနာခွန် ပေးဆောင်ခြင်း
နှင့်ပတ်သက်၍ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ
ဥပဒေနည်းဥပဒေများအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ အသေးစိတ် မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာအတိုင်း ရုံးချိန်အတွင်း
လာရောက်ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင် ပါသည် -
အမှတ် ( ၂၄/၂၆ ) ( ယခင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အဆောက်အအုံ )
ဆူးလေဘုရားလမ်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၃၇၁၀၅၃ ၊ ၃၇၀၅၆၁
Web Site : www.myanmarrubyenterprise.com
အမှတ် ( ၂၂ ) ပြည်လမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၆၆၂၆၄၆ ၊ ၆၆၆၂၁၈